ပင်မနေရာ ကြားဖြတ်သတင်း စစ်တပ်မှ အင်အားဖြည့်တင်းလျက်ရှိ
စစ်တပ်မှ အင်အားဖြည့်တင်းလျက်ရှိ	Wednesday, 26 October 2011 22:01	User Rating: / 0
PoorBest ??????????? ???? ????????????????????
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် K.I.A အား အစိုးရက အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရေး စစ်ဆင်ရေး စီမံချက် အကောင်အထည်ဖေါ်လျက် ရှိရာ အောက်မြန်မာပြည်မှ တပ်ရင်းများ အလုံးအရင်းနှင့် ချီပြီး အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် ညနေ ၅ နာရီပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဗန်းမော် သင်္ဘော ဆိပ်ကမ်းသို့ သင်္ဘောများဖြင့် တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ ပါလာသော သင်္ဘောပေါ်မှ စစ်သည်များကို အစိုးရ စစ်ကားကြီး (၈) စီးဖြင့် လာရောက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ K.I.O/ K.I.A အား အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရန်အတွက် အစိုးရဘက်မှ တိုက်လေယာဉ် (၁၀) စီးကို မြစ်ကြီးနားတွင် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 14:43 )